> Resource > iPhone > AVI Player u iPhone: Sida loo Play AVI on iPhone
Ma waxaad raadineysaa ciyaaryahan AVI awood iPhone in laydin sii ciyaari AVI on iPhone muuqan? Marka aad isku dayaan in ay sameeyaan, waxaad ka heli doontaa iPhone xitaa awoodin in ay aqoonsadaan files AVI aad. Sida laga soo xigtay Details ay, iPhone taageertaa files AVI la faahfaahinta soo socota:
AVI waa qaab weel warbaahinta ah. The video maqal iyo durdurrada gudaha ku kaydsan yihiin siyaabo kala duwan. Motion jpeg waa mid ka mid ah oo kaliya. Inta badan files AVI suuqa hadda aan encoded la Motion jpeg. Sidaa darteed, si ay u ciyaari files AVI on iPhone, waxaad u baahan tahay in marka hore la xaliyo arrinta incompatibility this. Waayo, kanu, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa gargaar aad u weyn. Sidaa daraadeed, waxaad ka ciyaari kartaa file AVI wax ku iPhone nooc kasta oo tayo sare leh.
Next, waxaana idin tusin doonaa sida loo ciyaaro AVI on iPhone si guul talaabo talaabo ah.
Ka dib markii la rakibey, waxaad u baahan tahay in ay sii wadaan app this ka dibna dajiyaan files AVI si loogu badalo. Si aad u samayn, in aad sidoo kale riix "Add Files" button ee geeska bidix ee kore ee interface this app ee xitaa your computer dooro faylasha aad rabto in aad ku darto, ama si toos ah u furi folder meesha faylasha aad ku kaydsan yihiin computer iyo markaas jiidi files AVI aad rabto in ay app this.
2 qaab saarka Select iPhone
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan iPhone sida qaab wax soo saarka. Marka hore kala liiska qaabka wax soo saarka adigoo riixaya image qaab ee guddiga Output Qaabka ah, oo ka dibna tag "Device"> "Apple". Halkan, ku dhowaad dhammaan noocyada iPhone lagu daro. Just dooro mid sida ay qalab aad.
3 Start AVI in ay diinta ka iPhone
Just bilaabi AVI in ay diinta ka iPhone adigoo riixaya "Beddelaan" button ee geeska gacanta midigta hoose ee AVI si Converter iPhone. Xawaaraha Wareejinta waa ultrafast. Dhowr daqiiqo ka dib, waxay kaa caawin doontaa in aad ku dhameysan dhan ah hawlahan.
Fiiro gaar ah: Waxaad si deg deg ah u furi karo folder saarka adiga oo riixaya ah "Folder Open" badhanka hoose ee app this. Sidoo kale, waxaad halkan u bedeli kartaa.
4 Transfer badaley files si iPhone for loo maqli karo
Raadi files wax soo saarka sida ay jaan file ay, ka dibna iyaga dajiyaan in Lugood. Marka lagu sameeyey, waxaad sii wadi kartaa in ay hagaagsan files kuwaas oo si aad u iPhone loo maqli karo. Waa intaas.